Antony 3 Tsy mahomby ny ekipa mpivarotra raha tsy misy Analytics | Martech Zone
Ny sary nentin-drazana an'ny mpivarotra mahomby dia olona iray miainga (angamba miaraka amin'ny Fedora sy kitapo), mitondra fitaovam-pitiavana, faharesen-dahatra ary finoana ny zavatra amidiny. Na dia manana anjara toerana amin'ny varotra aza ny maha-tia olona sy ny hatsaram-panahy ankehitriny, Analytics nipoitra ho fitaovana lehibe indrindra amin'ny boatin'ny ekipa mpivarotra rehetra.
Ny data dia ivon'ny fizotry ny varotra maoderina. Ny fanaovana tombony betsaka amin'ny angon-drakitra dia midika fitrandrahana ireo fahitana marina hahitana izay mandeha sy izay tsy mandeha. Raha tsy misy Analytics amin'ny toerana hanaovana izany, ny varotra sy ny mpivarotra dia tena miasa ao amin'ny maizina, tarihin'ny intuition. Amin'ny maha-fananganana Analytics mitombo tsy mitsaha-mitombo, ary rehefa miha makarifary kokoa ireo fitaovana dia tsy ampy ny charisma; tsy mahavita mampifangaro Analytics mandritra ny tsingerin'ny varotra dia maneho fatiantoka mampifaninana.
Fikarohana avy amin'i McKinsey, navoaka tao amin'ny ebook mitondra ny lohateny Big Data, Analytics ary ny hoavin'ny Marketing & Sales, dia nahita fa ireo orinasa izay mampiasa mahomby ny Big Data sy Analytics asehoy ny tahan'ny famokarana sy ny tombom-barotra izay 5 - 6 isan-jato avo noho ny namany. Ankoatr'izay, ireo orinasa mametraka ny angon-drakitra eo afovoan'ny fanapaha-kevitra momba ny varotra sy ny varotra dia manatsara ny marketing fiverenana amin'ny fampiasam-bola (MROI) amin'ny 15 - 20 isan-jato, izay manampy hatramin'ny $ 150 - $ 200 miliara fanampiny.
Andao hizaha ireo antony telo lehibe mahatonga ny ekipa mpivarotra tsy hahomby raha tsy misy analytics.
1. Mpihaza mihaza ao anaty haizina
tsy misy Analytics, ny fahafantarana ny fomba hanovana ny fitarika ho lasa mpanjifa dia miorina amin'ny tombantombana sy / na am-bava. Ny fianteherana amin'ny tsinainao, fa tsy ny angona, dia midika hoe mandany fotoana sy hery be amin'ireo olona diso, lohahevitra, endrika fampisehoana - na ireo rehetra voalaza etsy ambony. Ankoatr'izay, ny repte varotra dia tsy miezaka fotsiny manova fitarihana, fa manova azy ireo ho mpanjifa maharitra sy sarobidy.
Tsy zavatra azo atao amin'ny tanana io satria be loatra ny fiovaovana sy ny fifangaroana miafina. Tsy misy mitarika roa mitovy ary mety miovaova ny fahalianan'izy ireo ary mivoatra isan'andro. Ireo mpamaky varotra, manandrana araka izay mety ho izy, dia tsy mpamaky saina. Soa ihany Analytics afaka manazava kely.
Ny Analytics dia afaka mamoaka angon-drakitra fifamofoana, mampiharihary izay mandeha sy izay tsy mandeha, ka miditra ny mpivarotra isaky ny fivoriana voaomana. Ny fianarana avy amin'ny resaka varotra sarobidy indrindra dia ahafahan'ny repoblika manatsara hatrany. Ohatra, Analytics dia afaka mamaritra raha toa ka misy valiny fampisehoana sasany mahazo valiny mahery kokoa noho ny hafa, raha mihena ny fahalianana aorian'ny fotoana iray lasa. Io fahitana io dia ahafahan'ny repoblika manatsara ny tahan'izy ireo akaiky ary mampihena ny tsingerin'ny fivarotana. Ny Analytics dia afaka mamoaka fironana ihany koa ary mampitombo ny fitoniana ny fantsona, amin'ny alàlan'ny fampiasana angon-drakitra mba hahatakarana izay fifanarahana mety hikatona.
2. Atsofohy ao anaty fotaka
Matetika ireo mpivarotra dia mijanona amin'ny fomba famokarana tsy tapaka. Miezaka mamokatra faran'izay betsaka araka izay azo atao izy ireo, mandefa azy ireo any amin'ny varotra hanenjika azy, ary avy eo mifantoka amin'ny valin-kafatra anecdotal momba izay heverina fa mandeha. Na izany aza, araka ny voalaza tetsy ambony, ny ankamaroan'ny mpitarika dia tsy miova mihitsy. Raha tsy misy Analytics, ny "maninona" dia mijanona ho mistery ary ny mpivarotra dia tsy mianatra amin'ny hadisoany.
Engagement Analytics omeo ny valin'ny varotra sy ny mpivarotra mba ho afaka aotra amin'izay tena olana izy ireo. Manolotra fahitana tsy manam-paharoa amin'ny safidin'ny mpanjifa izy ireo ary izany dia ahafahan'ny ekipa miha-hendry sy mandaitra kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Izay heverin'ny ekipa mpivarotra fa ny teboka matanjaka indrindra dia mety tsy ny fivarotana matanjaka indrindra, ary mety hijanona ny ezaka ataon'izy ireo vokatr'izany. Engagement Analytics dia fitaovana mahery vaika tsy mijanona izy ireo tamin'ny fanovana ny POV, ary ny fanomezana angon-drakitra mafy momba izay atiny sy paikady misy akony lehibe indrindra. Raha vantany vao takatr'izy ireo ny dia nataon'ny mpanjifa dia afaka manatsara ny fizotrany mifanaraka amin'izany izy ireo.
3. Marketing varotra
Na mivarotra tee-shirt na rindrambaiko fitantanana kaonty orinasa ianao, ny fanamafisana dia manamafy ny lanja fivarotana anao. Ireo mpividy amin'izao fotoana izao dia tototry ny vala tokoa ka tsy manam-potoana na liana amin'ny vokatra izay tsy mifandraika mivantana sy mifanaraka amin'ny filan'izy ireo manokana. Na izany aza, ny orinasa rehetra, ary na ny mpividy rehetra aza dia samy hafa, izay mahatonga ny fahatakarana ny filan'izy ireo sy ny fanaovana manokana ny toerany mifanaraka amin'izany toa asa tsy azo tanterahina, farafaharatsiny tsy Analytics manampy.
Ny varotra sy ny mpivarotra dia manana angona be dia be eo am-pelatanan'izy ireo avy amin'ny loharano anatiny sy ivelany izay afaka manampy amin'ny famoahana izay tadiavina sy tadiavin'ny prospect. Mampiasa Big Data, Analytics, ary ny fianarana milina, ny orinasa dia afaka mampifanaraka ny hafatr'izy ireo amin'ny mpanjifa mety ho avy. Amin'izao fomba izao, Analytics manavaka ny haavonao amin'ny vahoaka ary mampitombo ny fahafaha-mikatona ny fifanarahana.
Nandritra ny fizotry ny varotra, Analytics mahatonga ny ekipa mpivarotra sy varotra ho marani-tsaina kokoa, mahomby kokoa ary mahomby kokoa, tsy lazaina intsony fa mifanaraka kokoa, izay mifandray amin'ny famokarana varotra. Ilaina izany eo amin'ny tontolon'ny fifaninanana ankehitriny, ary araka ny faminaniana mialoha Analytics miala, ho lasa tena ilaina fotsiny.
Ny orinasa dia miankina bebe kokoa amin'ny vinavina Analytics manamboatra synthesize data, manatsara ny asany, ary manatsara ny fanapaha-kevitra. Gartner ny Hype Cycle ho an'ny CRM Sales (2015) pegs Sales Predictive Analytics ho teknolojia lafo vidy ao anatin'ny roa ka hatramin'ny dimy taona ho avy, ary Forrester Research nahita fa efa ho ny roa ampahatelon'ny mpivarotra no manatanteraka na manatsara ny vinavina Analytics vahaolana anio na mikasa ny hanao izany ao anatin'ny 12 volana ho avy. vinavina Analytics maka ekipa mpivarotra manomboka mavitrika ka hatramin'ny mavitrika. Raha tsy manararaotra ireo fitaovana ireo izy ireo dia ho hitan'ny orinasa fa tavela ao anaty vovoka izy ireo.
Tags: AnalyticslehibefamafanaDataangona firaketanafikarohana forrestergartnerfamerenana amin'ny raharaham-barotra Harvardhbranalytics sy varotrafamerenam-bola amin'ny famatsiam-bolamarketing roiMcKinseyfiverenana amin'ny fampiasam-bolaROIanalytics momba ny varotradata momba ny varotravarotra manokanavarotra miverina amin'ny fampiasam-bolavarotra roi
Michael Schultz dia mitarika ny fampandrosoana ny varotra sy ny orinasa ClearSlide. Talohan'ny ClearSlide dia niasa ho VP an'ny Alliances stratejika ao DocuSign izy, toerana nitondrany ny fitantanana sy fiaraha-miasa lehibe an'ny orinasa nandritra ny telo taona nitomboany haingana. Michael dia nandany efa ho valo taona niaraka tamin'ny Microsoft Corporation tamin'ny fitantanana vokatra sy ny varotra SaaS isan-karazany taorian'ny fahazoana ny fivorian'ny Internet PlaceWare.